Home CAYAARO Kenya: gabadh haysatay Rikoodhka Orodka oo maydkeeda la helay
kenya's Agnes Tirop
Kenya-(berberanews)-Gabadha reer Kenya ee Agnes Tirop oo haysata rikoodhka adduunka ee ciyaaraha fudud ayaa la helay ka dib tooreey lagu dilay gurigeeda oo ku yaal magaalada Iten ee galbeedka.
Gabadhan oo Laba jeer ku guuleystay billadda naxaasta ah ee Ciyaaraha Fudud ee Adduunka, oo kaalinta afaraad ka gashay finalka Olombikada 5,000m laba bilood ka hor, wxay da’deedu ahayd 25 jir.
“Markuu [boolisku] soo galay guriga, waxay ka heleen Tirop oo sariirta saaran waxaana dhulka yaal barkad dhiig ah,” ayuu yiri Tom Makori, oo ah madaxa booliiska aagga.
“Waxay arkeen in qoorta laga muday, taas oo nagu kaliftay inaan rumeyno inay tahay dhaawac mindi, waxaanan aaminsanahay inay tahay waxa sababay geerideeda.
“Ninkeedu weli waa baxsad yahay, baadhitaannada hordhaca ah waxay noo sheegaan in ninkeeda laga shakisan yahay maxaa yeelay lama heli karo. Boolisku waxay isku dayayaan inay helaan seygeeda si uu ugu sharaxo waxa ku dhacay Tirop.”
Makori ayaa intaas ku daray in booliisku ay rumeysan yihiin in CCTV -ga guriga laga yaabo inuu awoodo inuu ka caawiyo baadhitaankooda.
Tirop ayaa sidoo kale maydkeeda laga helay caloosha oo mindi lagala dhacay.
“Ciyaaraha Fudud ee Kenya waxay ku mashquulsan yihiin inay wax ka ogaadaan geerida lama filaanka ah ee ku timidHaweenayda haysatay billadda orodka ee 10,000m ee Agnes Tirop,” ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay kooxda ciyaaraha fudud ee dalkaas. Kenya waxay weyday dahab ka mid ah kooxaha ugu orodka badan ciyaaraha fudud ee masraxa caalamiga ah. ”
“Waa wax aan la dafiri karin, waa nasiib darro aad iyo aad u murugo leh in aan waynay cayaartooy da’ yar oo rajo leh oo 25 sano jir ahaan dalkeenna u soo hooysay sharaf aad u badan, ”ayuu yidhi madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
“Waxaa taas ka sii xanuun badan in Agnes, oo ah geesiyad Kenyan ah dhammaan tallaabooyinka, ay si xanuun leh u lumisay nolosheeda yar iyada oo loo marayo fal dambiyeed ay sii wadeen dad danayste ah oo fulay ah.”
“Waxaan ka codsanayaa hay’adahayaga sharci fulinta inay daba galaan oo gacanta ku soo dhigaan dambiilayaashii ka dambeeyay dilka Agnes si ay ula kulmaan awoodda sharciga oo dhan,” ayuu madaxweynuhu hadalkiisa ku daray.
Previous articleNorway: Nin ku hubaysan leeb iyo qaanso oo dad badan laayay
Next articleWasaaradda Arr. Dibedda Taiwan oo ka jawaabtay eedaha Shiinaha ee xidhiidhka Taiwan iyo Somaliland
“Waxaan ka tagay shaqadii Garsoorka S/land” Sakariye Dacwa
Maxamed Saalax: ciyaartoygii u horreeyay ee 3 gool ku dhaliyay Old Tratford